हिजो मलाई नानाभाँतीको आरोप लगाउने साथीहरुले कान खोलेर सुन्नुहोस र आँखा खोलेर पढ्नुहोस्:डा. पुन – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
हिजो मलाई नानाभाँतीको आरोप लगाउने साथीहरुले कान खोलेर सुन्नुहोस र आँखा खोलेर पढ्नुहोस्:डा. पुन
मैले थाहा नभएर अन्जानमा “छिमेकी भैया” भन्ने शब्द रा’खेर एउटा भिडियो शेयर गर्दा धेरै नै तराईबासी साथीहरुले बेस्सरी चि’त्त दुखाउनु भयो र घोर आ’पत्ति जनाउनु भयो! त्यस पछि मैले पोष्टमा “छिमेकी साथी” भनेर लेखें. अनी चि’त्त दुखाउनु भएका र आपत्ति जनाउनु भएका सबै साथीहरु संग थाहा नभएर लेखेकोमा माफी दिनुहोस भनेर माफी पनि मांगे!अब त्यो शब्द भारतमा जाँदा समेत र कहिं पनि कसै’लाई प्रयोग नगर्ने भनेर क’समै खाएको छु।खास गरि तराईबासी ने’पालीहरुलाई कसैले पनि भैया नभन्नु होला भन्ने सुझाब पनि दिन्छु।
तर अझै पनि निकै नै साथीहरु उफ्रि रहनु भएको छ र मलाई धेरै नै आरोपहरु र लान्छाना हरु लगाउनु भएको छ मानौं कि मैले उहाँहरुलाई नै भैया भनि रहेको छु। राम्रो संग पढ्नु होस् त – मैले तरा’ईबासी भैया भनेर भनेको ता थि’एन नि. “छिमेकी भैया” भन्दा भारत तिरका लाई आ’पत्ति हुनु पर्ने होई’न र ? तपाईहरु लाई किन आपत्ति भयो? जे होस् “छिमेकी भैया” भन्दा पनि तपाईहरुको चित्त दुख्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। अन्जानमा भनिएको कुरामा माफी माग्दा माफी पाउने कि नपाउने?? छोटो बुद्धी र सं’कुचित वि’चार मेरो कि तपाईहरुको ??
तपाईहरुले अरु आरोप ता जे लगाए पनि फरक पर्दैन तर मलाई तराईबासीहरुको बिरोधी भनेर जुन आ’रोप लगाउनु भएको छ, त्यसको म घोर खण्डन गर्दछु।मेरो नजरमा सारा मानव समुदाय समान छन्. खास गरि मैले बि’पन्न स’माज र बर्गहरुलाई अझै बढी माया गर्दछु। समाजमात्र होइन सारा गरीब देशहरुलाई पनि माया गर्दछु र सबैको गरीबी हटाउन सकिन्छ कि भनेर बिभिन्न उपायहरुको खोजी पनि गर्दछु र ब्यबहारमा लागु पनि गर्दछु. मेरो सो’चाई धेरै धेरै फराकिलो र स्वच्छ छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला।
अहिले मैले “राष्ट्रिय आ’विष्कार केन्द्र” खोलेर प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ कि भनेर सहयोग गरि रहेको छु. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा धेरै नै तराईबासी भाई बहिनीहरुले पनि अनुसन्धानहरु गरिरहेका छन् । बास्तबमा नयाँ नयाँ आईडिया लिएर अधिकतम रुपमा पहाडबासी भन्दा तराईबासी भाई बहिनीहरु नै आईरहेका छन् र उनी’हरुलाई बिना भे’दभाब सहयोग गरिएको छ।
साथ साथै भविष्यमा तराई तिर कुनै ठाउँमा यस्तै किसिमको आविष्कार केन्द्र खोल्न स’किन्छ कि भनेर संभावना पनि हेरी रहेको छु. अहिले को’रोनको महा’मारीमा पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तराईको सबै जसो जिल्लाहरुमा PPE र अन्य सामाग्रीहरु दिएको छ. तराईमा कोरोना धेरै फैलिएको हुनाले पहाड तिर भन्दा त्यता तिर धेरै सहयोग गरको छ. बि’चारलाई फराकिलो पार्नु होस् र तपाईहरुको प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई राष्ट्रिय आ’विष्कार केन्द्रमा ल्याउनु होस्। कुरा बुझ्नु भयो??
Previous जातीय वि’भेदको धरातलीय यथार्थको एउटा कु’रुप तस्बिर हो रुकुमको घ’टना -रवि ला’मिछाने
Next प्रकाश सपुतको मार्मिक प्रश्न: “म स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनिमा “मान्छे” मानिन्छु कि मा’निन्न ?”